ငါ ဇာအဆင့်ရောက်ဗျာလ်လဲ? | Great Arakan
Home Blogs ငါ ဇာအဆင့်ရောက်ဗျာလ်လဲ?
လူ့ဘဝ အရည်အသွေးကို လေ့လာရေ စိတ်ပညာရှင် အေဗရာဟန် ဟာရိုးဒ် မာ့ဆ်လိုး(Abraham Harold Maslow (April 1, 1908 – June 8, 1970))က ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခရေ စေ့ဆော်မှုနန့် လူ့လက္ခဏာ(Motivation and Personality)ဆိုရေ သူ့စာအုပ်ထဲမှာ၊ လူတိ လိုအပ်ချက်တိ အဆင့်ဆင့် (Hierarchy of Human Needs)နန့် သူ့သီအိုရီတိကို ဖော်ပြခပါရေ။
ယင်းသူ့သီအိုရီကို အလွယ်တကူ နားလည်ဖို့အတွက် အထက်က ပုံနန့် ပြန်ဖော်ပြလိုက်ပါရေ။
အေပုံကို တြိဂံပုံ ဆွဲထားရစွာက၊ လူတိ ပမာဏကို ပေါ်လွင်ဇီချင်လို့ပါ။ တြိဂံ အောက်ခြေက လူအများစုကို ကိုယ်စားပြုပနာ၊ တြိဂံ ထိပ်က လူနည်းစုကို ကိုယ်စားပြုပါရေ။
အဆင့် ၁) တြိဂံ အောက်ခြေ – ကဗာမှာ လူအများစုစွာ တြိဂံပုံ အောက်ခြေက “ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်” ဖြစ်တေ လီ၊ ရီ၊ အစားအသောက်၊ အရိပ်အာဝါသ၊ အအိပ်၊ အဝတ်အထည်၊ ကာမ ခံစားမှုအတွက်ရာ အဓိက ရုန်းကန်နိန်ကတ်ရပါရေ။
အဆင့် ၂) – လူတိစွာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်မှု ပြည့်စုံလာဗျာလ်ဆိုကေ “လုံခြုံမှု”ကို တောင်းတလာကတ်ပါရေ။ အလုပ်အကိုင်၊ အရင်းအမြစ်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ လုံခြုံမှုကို လိုချင်လာကတ်ပါရေ။
အဆင့် ၃) – လုံခြုံမှုလည်း ရှိသင့်သလောက် ရှိလာဗျာလ်ဆိုကေ၊ လူတိစွာ လူတောတိုးချင်လာ “အသိုက်အဝန်းနန့် နိန်ချင်”လာပြန်ပါရေ။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း၊ ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်၊ မိသားစု၊ အသိုင်းအဝန်းတိနန့် သသိုက်မြမြိုက် နိန်ချင်လာကတ်ပါရေ။
အဆင့် ၄) – လူတောထဲလည်း ရောက်ဗျာလ်ဆိုကေ၊ တခါ လူရိုသေ၊ ရှင်ရိုသေ “အသိအမှတ်ပြုခံချင်လာ”ပြန်ပါရေ။ ငါသိရေ၊ ငါတတ်ရေ၊ ငါက ဇာကောင်၊ ငါ့မှာ ဖေ့သာဘလောက်ရှိရေ၊ မင်းက ဇာကောင်လို့လဲ အစရှိရေ အသိအမှတ် ပြုခံချင်စိတ် ပြင်းပြလာပနာ၊ အားပြိုင်လိုစိတ်နန့် အနှောင်အဖွဲ့ကင်းရေ လွတ်လပ်မှုတိကို ကကောင်း လိုချင်လာပြန်ပါရေ။
အဆင့် ၅) တြိဂံထိပ် – နောက်ဆုံးမှာ လူတိစွာ “ကိုယ့်အခြေအနေကို နားလည်ရေ အဆင့်”ကို ရောက်လားကတ်ပါရေ။ ငါစွာ သာမန် လူတိထဲက လူတယောက်၊ တယောက်ထက်လည်း မမြင့်၊ မနိမ့်။ ငါတတ်စွာ ငါသိစွာတိလည်း ရှိက လူတိ တတ်သိနားလည်စွာတိကို ထပ်ဆင့် သင်ယူလာ၊ တတ်ယူလာစွာတိ၊ ငါ ပိုင်ဆိုင်စွာတိလည်း မမြဲရေ စိတ်ခံစားမှုတိ၊ ပီးဆပ်မှုတိလို့ နားလည်လာပနာ၊ ပြဿနာတိကို ဘက်လိုက်မှု မရှိဘဲ၊ အရှိကို အရှိအတိုင်း မြင်ပနာ ဖြေရှင်းတတ်လာပါရေ။ သဘာဝတရားကို ပိုနားလည်လာပနာ၊ အချက်အလက်တိကို လက်ခံတတ်လားပါရေ။ လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားပနာ၊ ဖန်တီးတတ်မှု ပိုအားကောင်းလာပါရေ။ အေအခြေအနေကို ရောက်တေ လူတိက ကဗာမှာ ကကောင်း နည်းရေ လူနည်းစုလောက်ရာ ရှိပါရေ။
အေပုံကို အသေအချာ ကြည့်ပနာ နားလည်ဗျာလ်ဆိုကေ၊ ကိုယ် ဇာအဆင့်မှာ ရှိလဲဆိုစွာ နားလည်နိုင်ရေပိုင်၊ လူတယောက်ချင်းစီကို အေလူ ဇာအဆင့်မှာ ရှိလဲဆိုစွာကိုလဲ ခန့်မှန်းနိုင်ပါရေ။
ဘဝအတွက် အသုံးဝင်ဖို့ ထင်ပါယင့်။
Previous articleကဗာ့အကြီးဆုံး အခွန်ကင်း ကုန်သွယ်ရေးဇုန် ဖြစ်ဖို့ အာဖရိကတိုက် ပြင်ဆင်
Next articleအပ်ပါးလ် အိုင်ဖုန်း ရောင်းရငွေ မှန်းထားစွာထက် ဒေါ်လာ ၉ ဘီလီယံ နည်း